Lacho Alquife House. Igumbi elinye, eLas Minas
Ihostele yePilgrim, €13 PRICE umntu ngamnye. Kumantla eSierra Nevada, indawo efudumeleyo neqhelekileyo, kunye neelwandle zaseAlmeria 45 imizuzu kude kunye nesixeko saseGranada imizuzu engama-45 kude, imizuzu engama-20 ukusuka apho unokonwabela ukutyibilika elwandle kwizibuko laseLa Ragua, ikhabhathi. emoyeni, iimbono ezintle Sierra Nevada kunye imigodi Alquife odumileyo, indawo yokuhlala kakhulu impumelelo Ekundulukeni sisibini kunye nosapho, iphumle emazantsi entaba. Ixabiso lethu yi-€ 13 ngomntu ngamnye.
Ihostele yePilgrim (ixabiso ngomntu ngamnye, PRICE ngomntu ngamnye) ikumntla weSierra Nevada, indawo efudumeleyo neqhelekileyo, sinamanxweme aseAlmeria imizuzu engama-45 kude kunye nesixeko saseGranada imizuzu engama-45 kude, imizuzu engama-20 ukusuka apho unako. kunandipha Ukuskiya cross-lizwe kwizibuko la Ragua, siya kuba umoya kwindlu, iimbono ezintle Sierra Nevada kunye imigodi Alquife odumileyo, indawo yethu kakhulu Ekundulukeni sisibini kunye nosapho, iphumle, kufuneka acoce ingqondo yakho kwi emazantsi entaba, idolophu yethu kushushu kakhulu nabantu uhlobo kwaye banobuhlobo, kunye nenkonzo ivenkile, ezempilo kunye nolonwabo. Kwihostele yethu sinamagumbi ama-4, 1 single, 1 kabini kunye namagumbi osapho ama-2, igumbi lokuhlambela elikhulu, ikhitshi elikhulu-igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala elitofotofo kunye neTV, iDVD. Ixabiso lethu yi-13 euro ngomntu. Ukuba ufuna ukubhukisha yonke ihostele kusapho lwakho lonke, ungaqhagamshelana nathi kwaye unokufumana isaphulelo esihle kakhulu, sinomthamo weendwendwe eziyi-13. Ungalibazisi kwakhona kwaye ubaleke kwindlela yesiqhelo, siya kuhlala sikulindile ngovuyo.
Ihostele yabahambi ngezonqulo kubuso obungasentla beSierra neveda, indawo eqhelekileyo, sinawo amanxweme aseAlmeria imizuzu engama-45 kunye nesixeko saseGranada imizuzu engama-45, imizuzu engama-20 unokuyonwabela ukutyibilika ngasemva, sinendawo yekhabhinethi, imbono entle ukuya kwindawo yokutyela. I-Sierra Nevada kunye nemigodi edumileyo yase-Alquife, indawo yethu yokuhlala igqwesile UKUHAMBA njengesibini kunye nosapho, phumla kwaye ucoce ingqondo yakho emazantsi entaba, idolophu yethu kukho abantu abanobungane, kunye nenkonzo yevenkile, impilo kunye neendawo zokuzonwabisa. Kwihostele yethu sinamagumbi ama-4 1 single 1 kabini kunye nosapho olu-2, igumbi lokuhlambela elikhulu, ikhitshi elikhulu kunye negumbi lokuhlala elitofotofo kunye neTV kunye neDVD, Ixabiso lethu yi-€ 13 ngomntu ngamnye. Ukuba ufuna ukubhukisha yonke ihostele kusapho lwakho lonke ungaqhagamshelana nathi kwaye ungafumana isaphulelo esihle kakhulu, sinomthamo weendwendwe eziyi-13. Musa ukuthandabuza kwakhona kwaye ubaleke kwindlela yesiqhelo, siya kukulinda ngovuyo.
Abemi bedolophu yethu bangabantu abanobubele nabanobuhlobo, abasoloko bekulungele ukunceda, sinotyelelo oluninzi oluvela kubafoti kunye nabenzi befilimu, ngenxa yemimandla enomdla esinayo, kwelinye icala ubuso obungasentla beSierra Nevada kwaye kwelinye icala. ezimayini edume Alquife nge dolophu yayo endala.
Ngokubanzi, ndikufutshane nendawo yokulala, xa ndingekho ndiza kushiya inombolo yam yobuqu kwiodolo.